Vhidhiyo Kushambadzira Kunoshanda | Martech Zone
Wese munhu ari kugadzira fungidziro yavo yekupera kwegore. Ini ndinofunga unogona kumbomira hoopla yese uye nekushandira yako yekushambadzira zano gore rinouya rinoenderana nezvose chokwadi. Multi-chiteshi nzira, kushambadzira otomatiki, nhare uye vhidhiyo zvichaenderera mberi kutyaira kubatikana uye traffic kune rako bhizinesi. Heano akakura infographic ane anonakidza matanho anotsigira chako kudiwa kuti uite yakarongeka vhidhiyo kushambadzira zano muna 2014.
Delos Incorporated inogovera izvi Vhidhiyo Kushambadzira Matipi:
urongwa - Vhidhiyo inofanirwa kuve chikamu chehurongwa hwako hwekushambadzira, zano rekubatana rinotsigira zvinangwa zvako. Kugadzira vhidhiyo yakakura haina kukwana - unofanirwa kuishandisa! Ziva zvinangwa zvako - kunyangwe vari kusimudzira ruzivo kana bhizimusi rekutyaira - uye simbisa yako metric yekubudirira
Revai - Ndiani wako waunotengesa musika uye chii chako bhajeti? Paunenge uchinge wapindura iyo mibvunzo, tsvaga vhidhiyo yekugadzira kambani iyo inogona kuunza chiono chako kuhupenyu. Funga nezve kuratidzira vatengi vakagutsikana kana yako yakasarudzika masevhisi.
Kurudzira - Isa ngowani yako yemagariro uye wotanga kugovana! Vatengi vako vanotandarira kupi? Tsvaga ivo uye paradzira iro shoko. Funga Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Youtube…
Tags: ciscodelos inosanganisirwaeloquaemarketerFacebookfacebook vhidhiyoinfographicinternet mutengesimarketing sherpaKushambadzira Vhidhiyomhute midhiyakutendeuka kwevhidhiyovhidhiyo kubatanidzwavhidhiyo kushambadziravhidhiyo kushambadzira zanovhidhiyo chirongwavhidhiyo prvideo productionkusimudzira vhidhiyovhidhiyo zanomavhidhiyoYouTube
Salesforce: Yako Yakagadziriswa Gore muKudzokorora Infographic